उपचारका नाममा गुम्बामा लगेर युवतीहरुको यौ न शोषण गरेर यस्तो फोटो खिचे लामाले ! – Etajakhabar
उपचारका नाममा गुम्बामा लगेर युवतीहरुको यौ न शोषण गरेर यस्तो फोटो खिचे लामाले !
धार्मिक विधिबाट उपचारका नाममा गुम्बामा लगेर युवतीहरुको यौ न शोषण गरेको आरोपमा उच्च अदालत पाटनले एक लामालाई ७ वर्ष कैद र ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको छ । निर्दोश ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला पल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र रमेशबहादुर थापाको इजलासले ‘धर्मगुरु’ सहित उनकी सहयोगीलाई साइबर अपराधमा समेत दोषी ठहर गरेको छ ।
उच्च अदालतको फैसलापछि प्रहरीले लामालाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ । लामाकी सहयोगी मनीषा लामालाई भने युवतीका आपत्तिजनक अवस्थाका फोटा फेसबुकमा अपलोड गरेको अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस : छोरी शिक्षित भए मात्र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव ः मुख्यमन्त्री राउत
Posted on: Thursday, October 17, 2019 Time: 9:54:35